Salaamanews » 21-ka Nov. Maalinta macallimiinta Soomaaliya (Warbixin)
Home » Dhaqanka, Warar, Waxbarashada 21-ka Nov. Maalinta macallimiinta Soomaaliya (Warbixin) Print - Daabace: SalaamaNews - Nov 21st, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Jaamacaddii ugu horreysay oo laga furay Xirada Dhadhaab220 Arday oo ka qalin jabisay jaamacadda PlasmaProf. Jawaari oo dhiirra galiyay ardaydii ugu horreysay oo Muqdisho kaga qalin jabisay Master-kaMuqdisho ma mudantahay marti galinta doorashada?04-tii October maalin murugo leh (Warbixin)
(Salaamanews)-Maalimba macney bulsho u leedahay maantana waa maalin qiimo iyo sharaf ku dhexleh bulsha weynta Soomaalida, waana 21-ka November oo ah maalinta macallinka oo si weyn looga qiimeeyo dalka Soomaaliya.
Soomaaliya oo dhan waxaa maanta looga dabaal degayaa xuska maalintan faca weyn waxaana fantastiyayaha maalintan si weyn uga soo dhexmuuqanayo, macallimiinta wax ka dhiga Iskuullada nidaamiga ah, kuwa privets-yada ah, kuwa ganacsiga iyo macaahidda kala duwan iyadoo Jaamacaduhu ay qaadan doonaan doorka ugu muhiimsan dabaal daga.
Dowladii dhexe ee Soomaaliya ayaa 21-kii November sanadkii 1974-kii u aqoonsatay maalinta macallinka Soomaaliya, waxaana waqtigaasi intii ka dambeysay la xusayay munaasibaddan sharafta ku dhex leh bulsho weynta Soomaalida.
Maanta ayaa ka duwan 20-kii sano ee munaasibadahan oo kale la soo maray waxaana maanta jirta in dalka iyo dadkuba ay fursad u hayaan in si nabdoon ay u soo bandhigaan shucuurtooda, waxaana jirtay in sanadihii burburka ee la soo dhaafay ay dadka iyo dalkuba ay ku mashquulsanaayeen xaalad amni xumo.
Prof. Jaamac Nuur Kheyre waa bare ku sugan magaalada Muqdisho, isagoo watay calanka dalka kuna labisan dharka macallinka ayuu Salaama News u sheegay in uusan waligii arkin maalin kaga farxad badan maantadan uu taaganyahay.
“Waxaan macallin ka soo noqday dugsiyo sare iyo Jaamacado waxaana labaatankii sano ee burburka aan ku shaqeynayay xirfadda macallinimada, laakiin ima aysan soo marin maalin iiga farxad badan maantadan” waxaa sidan yiri Prof. Kheyre.
Macallimiin kale oo aan la hadlay waxay sheegeen in maanta ay dareen gaar ah ku leedahay bulshada Soomaalida, gaar ahaan macallimiinta Soomaaliyeed.
Macallimiinta oo ah isha aqooneed ee dadka Soomaalida ayaa hadda u muuqda in xaalad adag ay ku jiraan, waxaana u kuur galnay sida ay ku shaqeeyaan macallimiinta Soomaaliya.
Dr. kamaal Axmed, waa maamule Jaamacadeed wuxuuna ku suganyahay Muqdisho mar aan hor dhigay su’aal aheyd, sida loo maareyn karo duruufaha ay ku shaqeeyaan macallimiinta ayuu xusay in aan la soo koobi Karin daruufaha ay ku shaqeeyaan macallimiinta Soomaaliyeed.
“Hadii aan eego macallimiinta iskuulllada nidamiga ah wax ka dhiga, waxay maalintiiba galaan todobo xiisadood, waxay qaataan mushaar aan kaafin baahida ay qabaan ee aas aasiga ah, macallimiinta jaamacadaha waxay dantu bidaa in jaamacado dhowr ah ay xiisado kala duwan galaan iyagoo jaamacado kala nuuc ay tagaya, waxay xiisadiiba qaataan todobo dollar ama shan dollar” sidaasi ayuu duruufaha macallinka ku micneeyay Dr Axmed.
Si kastaba ha ahaatee waxaana la soo koobi Karin duruufaha iyo dhibaatooyinka ay la daalaa dhacayaan barayaasha Soomaaliyeed, balse baahida aas aasiga ah waxay la qabaan bulshada inteeda kale oo iyagu dhibaatada amni xumo ay dareentay.
Tags: faallo, warar, waxbarashada « Qoraalkii HoreAl-shabaab oo iska fogeysay dhibaatooyinka ka socda Kenya	Qoraalka Xiga »California suspects in terror plot ‘saw this as jihad,’ FBI says	Halkan Hoose ku Jawaab